यौन जिज्ञासा Archives - Page3of 66 - Sawal Nepal
श्रीमती यौ*नसम्पर्कवाट सन्तुष्ट भएको छिन् कि नाई यसरी थाहा पाउनुहोस् ?
पाईंकी श्रीमती सन्तुष्ट नभएकै हो वा तपाईंलाई त्यस्तो लागेको मात्र हो भन्ने कुराअनुसार फरक–फरक समाधान हुन सक्छ । तपाईंकी श्रीमतीमा यौनेच्छा बढी भएको पनि हुन सक्छ । यो कुरा तपाईंहरूबीचको सम्बन्धको सुमधुरता मात्र होइन, शारिरीक तथा मानसिक स्थितिमा पनि भर पर्छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यौनसम्पर्कवाट मात्र महिलाले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने होइन
यौन आनन्द लिए सँगै पुरुषहरु यसकारण छिट्टै निदाउने गर्छन !
एजेन्सी- महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्बन्ध भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउँने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । शारीरिक सम्बन्ध राख्ने वित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउँने पुरुषप्रति महिलाहरुको धारणा फरक हुने गर्छ । जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, असन्तोषी जस्ता आरोपहरु लगाउने गर्छन् । तर, के वास्तवमै यौनसम्पर्क
एउटा सम्बन्ध जोगाउनको लागि जति एक अर्काबीच प्रेम जरुरी छ त्यति नै जरुरी छ एक अर्कासँग नीजि पल विताउनु । त्यसमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि सामान्य नै मानिन्छ । जसले सम्बन्धमा थप मिठास ल्याउँछ । तर एउटा अनुसन्धानले यसलाई गलत प्रमाणित गरिदिएको छ । अनुसन्धानको परिणाम माथिको भनाईभन्दा फरक निस्किएको छ । अनुसन्धानको अनुसार शारीरिक
एजेन्सी हरेक बयस्क मानिसमा यौन चाहना हुनु स्वभाविक हो । सामान्यत महिलाहरु पूरुषको दाँजोमा यौंन सम्पर्कको चाहना भएपनि व्यक्त गर्न सक्दैनन् अथवा व्यक्त गर्न लजाउँछन् । यसर्थ यहाँ महिलाहरुमा यौन चाहना भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गरिन्छ । उनीहरु यौन सम्पर्क गर्ने तिव्र इच्छा हुँदा हुँदै पनि दवाएर राख्ने गर्दछन् । यसर्थ
लाइफ पार्ट्नरसँग बेडरुममा हुँदा पनि नहट्ने टेन्सन !
काठमाडौं । जीवनसाथी होस् या केटी साथी । सँगसँगै बिताएको पललाई बिर्सन मुस्किल हुन्छ । तैपनी हाम्रो दिमागमा एकप्रकारको तनावले छोडेको हुँदैन । अफिसको तनावपनि घरमा बसिरहेको समयमा आइरहेको हुन्छ । पार्ट्नरसँग भएको बेला पनि दिमागबाट नहट्ने तनावले धेरैलाई सताएको हुन्छ । इंडिया टुडेले गरेको सर्भे अनुसार, भारतमा जीवनसाथीसँग भएको बेला पनि अधिकांश मानिस तनावमा
कारण जुनसुकै होस् तर हामी सबैका लागि एउटा यस्तो समय आउन सक्छ, जतिबेला हामी शारीरिक सम्पर्क (से क्स) गर्न सक्दैनौं । यो विषय विवाहित र अविवाहित सबैका लागि लागू हुन्छ । विवाहित व्यक्ति पनि सधैं शारिरीक सम्पर्क गर्न सक्षम हुनसक्छन् भन्ने हुँदैन । तर, तपाईंले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ कि लामो समयसम्म शारीरिक सम्पर्क सम्पर्क
काठमाडौैं । पूँजिवादमा सेक्स भन्ने कुरा सामान्य दिनचर्या बनेको छ । अर्कोतर्फ यो अर्थतन्त्रको मुख्य राजस्व श्रोत समेत बनेको छ । महिलाहरुको जीउ बेचेर धनी हुने देशहरु, महिलाको अस्मिता बेचेर महिला उत्थान र सशक्तिकरण गर्ने देशहरु विश्वमा बढ्दै गइरहेका छन । र, यी देशहरुमा बाध्यतावश कतिपय महिलाहरु यौनबजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन । छोटो समयमा बढी
एजेन्सी : यौन सम्वन्ध माहिला पुरुष दुबैको लागी अपरिहार्य कुरा हो । जुन जीवनमा फरक–फरक खालको यौन अनुभव गर्न चाहान्छन् । पहिलो पटकको यौन सम्वन्धका बारेमा नवयुवाको मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्ने गर्दछन् र खुलदुली पनि हुने गर्दछन् । खुलदुलीका विच एउटा छुट्टै खुसीको महसुस पनि नवजवानहरुले गर्दै रहन्छन् । भर्खरै किशोरअवस्थामा पुगेका युवाहरुमा यौनका विषयमा
डा. राजेन्द्र / म १९ वर्षको भए । म १३ वर्षको हुँदा कुकुरसँग यौनसम्पर्क भएको यियो । दुई–तीन पटक लिङ्ग पसाउँदा वीर्य स्खलन होला जस्तो भएर बाहिर निकालेको थिएँ । त्यसको केही महिनापछि मेरो वीर्यमा ठोस पदार्थ (चामल जस्तो) देखियो । कुकुरसँग सम्पर्क हुँदा यस्तो हुन्छ र ? अनि यसबाट कुनै यौनरोग (SITI) सर्छ ? यौनरोग (SITI) पिसाब जचाउँदा थाहा हुन्छ
म २७ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मेरो समस्या fast fall हो, अर्थात् २–३ मिनेटपछि नै fall हुन्छ । त्यसकारण यो छोटो समय कसरी रोक्ने र कसरी समय लम्ब्याउने ? मेरो लिंग पनि रातो भएर दुख्छ । – पी. यौनसम्बन्धी कुरालाई हामी सचेत मनले मात्र गर्ने कुरा हो भन्ने मान्छौं, तर यो हामी निदाएको बेला